Kabaha badbaadada adduunka ee ugu fudud! 285 GRAMS | waxaa sameeyay AIRTOX
AIRTOX Kabaha badbaadada UL1P
285 grams WAXBARASHADA LIMAHA
Arinta yaabka leh Whitelayer ilaalinta ciddiyaha. Ilaaliyaha kacaanka kacaanka: Whitelayer®. Saldhigga maaddada waxaa markii hore laga soo saaray Mareykanka oo ah mashruuc gaar ah oo loogu talagalay askarta Mareykanka ee caanka ah, Navy Seals, oo u baahnaa jaakadaha xabbadda celiya oo si gaar ah u fudud oo jilicsan. Whitelayer® ayaa si habsami leh u sifeeyay shaqaalaha markabka Airtox LAB 32 si ay ugu habboonaato heerka kabaha badbaadada. Kooxda aadka u hanka weyn ayaa ka dhigtay maadada xitaa mid fudud, isla mar ahaantaana ka dhigaysa mid dabacsan sida dharka jikada ee caadiga ah. Isku dhafan oo ka sarreeya Whitelayer® concept2 ciddiyaha kabaha ayaa kaliya culeys ah 32 grams waana sidaas 55% ka fudud marka la barbar dhigo agabyada kale ee waardiyaha. Sida gunno dheeraad ah, maaddadu waa mid aad u dabacsan, neefsata iyo qoyaan qaadashada.
Injineernimada gaarka loo leeyahay “Carbon fiber extreme” cagaha daboolka 31 grams. Haa waan ognahay! - Koofiyadaha kaarboon-ka-kaabida ah ayaa horay loo arkay, laakiin maxaa ka dhigaya karboonka kaarboonku inuu ka dhigo mid cayn ah, waa injineerro horumarsan oo adeegsanaya farsamooyin aad u horumarsan marka lagu daro daaweynta cufnaanta hoose ee KDE. Marka aan sidaa yeelno, waxaan gaarno labadaba caabbinta saameynta sare, cabirrada ugu yar ee soojiidashada leh, iyo iska cad, miisaan aad u yar oo la yaab leh.
Superlite ka baxsan Dusha sare waxaa loo sameeyay iyada oo la adeegsanayo aluminiin laba-gees leh oo isku dhafan oo lagu daray nanotechnology. Sidii gunno ahaan, dusha sare waxay bixisaa raaxo aad u jilicsan oo jilicsan oo ay taageerto diyaarad gaar ah oo loo yaqaan 'Air-EVA', oo ay weheliso lakab khafiif ah oo ah caag aan caadi ahayn oo NRT ah.
Dharka sare ee neefta lagu dhejiyay ee Superlite micro. Maqaarka kore waxaa lagu sameeyaa isticmaalka dharka gaarka ah iyo dharka loo sameeyay ee ka kooban dunta farsamada sare iyo waxyaabaha microfiber ee heliosphere. Dhismooyinka ayaa markale ah kuwo aad u culus, isla mar ahaantaana dharka ayaa bixiya neefsashada habboon.
Arinta yaabka leh Whitelayer ilaalinta ciddiyaha. Ilaaliyaha kacaanka kacaanka: Whitelayer®. Saldhigga maaddadan waxaa asal ahaan lagu soo saaray Mareykanka iyadoo mashruuc gaar ah u ah askarta Mareykanka ah ee loo yaqaan 'Navy Seals', kuwaas oo u baahnaa jaakadaha dabka lagu ridi karo khaas ahaan kuwa fudud oo dabacsan….
“Carbon fiber extreme” suulka daboolka
Laba duulimaadyada-EVA, 3.2 qadka dhexe
NRT caag jilicsan
AIRTOX Kabaha badbaadada UL1 Gram